အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတိုင်းကို စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ အားပေးလိုက်တဲ့ Mrs. ဟန်နီချို
မြန်မာအိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေရဲ့ အလှတွေကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့နိုင်သူကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်အလှမယ် မဟန်နီချိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံပေါင်း ၉၀ ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ Mrs Universe 2019 အိမ်ထောင်ရှင်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာအိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီး မဟန်နီချိုကတော့ Winner ဆုကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကမ္ဘာပေါ်က အချောအလှတွေကြားထဲမှာ အောင်မြင်မှု သရဖူကို ဆောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ သားနှစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကလေး သုံးယောက်မေမေပါ။ မိသားစုတာဝန် ၊ ဇနီးမယားတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်တွေအပြင် ကိုယ်တိုင်လည်း စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဦးဆောင်နေတဲ့ အရည်အချင်းထက်မြက်တဲ့ မိခင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ဒီလို အစစအရာ ထူးချွန်လှတဲ့ သူမက စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာရော မိသားစုတာဝန်မှာပါ မလစ်ဟင်းအောင် တာဝန်ကျေသူတစ်ဦးပါ။
ကလေးသုံးယောက်မေမေ သူမဟာ Miss Golden Myanmar Organization ရဲ့ President တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အပြင် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးတော်ဆောင် လုပ်ငန်းသာမက တခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကိုပါ လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
သားသမီးတွေရဲ့ ကိစ္စအဝဝ နဲ့အတူ မိသားစုအရေး ၊ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အရေး ၊ အိမ်ရဲ့ စားဝတ်နေ‌ရေးတွေကို သေချာ စီမံကွပ်ကဲနေရတဲ့ သူမဟာ ခင်ပွန်းသည် အလုပ်သွားချိန် ၊ ကလေးတွေ ကျောင်းသွားချိန်မှသာ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မနက်စာ ပြင်ပေးတာတွေ၊ ကလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကျောင်းပို့တာတွေ လုပ်ပြီးတော့မှ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေ၊ Miss Golden Land Myanmar ရဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် အလုပ်များနေပါစေ...သူမရဲ့ မိသားစုကို အချိန်ပေးမှုတွေက လျော့ကျမသွားစေရဘူးဆိုတဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကတော့ ချစ်စရာ ၊ လေးစားစရာကောင်းလှပါတယ်။
သူမကတော့ ခု ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်ထားတဲ့ Mrs. Universe 2019 မှာ Winner ဆုကို ရရှိခဲ့ရုံတင်မကပါဘူး။ Mrs. Talent ဆုနဲ့ Mrs. Personality ဆုကိုပါ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။Mrs.Talent ဆု ကိုတော့ သမီးလေးနဲ့အတူ တွဲဖက်ကတဲ့ ရုပ်သေးအကနဲ့ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mrs. Personality ဆုကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် အလှမယ်တိုင်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ ဆုအမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် သူ့အနေနဲ့ အရမ်းကို ဂုဏ်ယူမိကြောင်းကိုလည်း ဖွင့်ဟလာပါတယ်။ ဒါတင်မက နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mrs. Tourism Queen 2018 ပွဲကို မလေးရှားနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ယှဥ်ပြိုင်တုန်းကလည်း Mrs. Talent ဆုအဖြစ် သမီးလေးနဲ့ အတူ တွဲဖက်ကခဲ့တဲ့ ပုဂံအကနဲ့ ရရှိခဲ့သလို Mrs. Tourism Ambassador 2018 ဆု နဲ့ Mrs. Global Tourism 2018 စတဲ့ ဆု ၃ဆုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
ဒီလို အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေကို ဝင်‌ရောက်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေဟာ မီးဖိုချောင်ထဲမှာအချိန်တွေ ကုန်ဆုံးနေတာမျိုး ၊ မိသားစုအလုပ်တွေနဲ့ပဲ ဘဝပြီးဆုံးသွားတာမျိုးမဖြစ်စေချင်တာကြောင့် ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
“ကျွန်မကတော့ ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်ရှင်မေမေတိုင်းမှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ချပြစေချင်တယ်။ အများပြည်သူတွေကိုလည်း ကျွန်မတို့မှာ ရှိတဲ့ Confidence တွေ၊ ကျွန်မတို့မှာရှိတဲ့ Talent တွေကို ချပြချင်တယ်။ ကျွန်မတို့မှာ ရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေက ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင် အောင်မြင်မှုရနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ကို မှီခိုနေတဲ့ သားသမီးတွေအတွက်လည်း သူတို့မေမေတွေဟာ မီးဖိုချောင်ထဲမှာပဲ ချက်ပြုတ်နေတဲ့ မေမေမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုမျိုး အများအလယ်မှာ ဂုဏ်ယူစွာ ဝံ့ထည်နိုင်တဲ့ သူတို့ ဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့ မေမေဖြစ်ချင်တာကြောင့် ခုလို ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့တာပါ” လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှင်မတိုင်းကို အားပေးလိုက်တဲ့ သူမ
ခုလို အိမ်ထောင်ရှင် အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ပြီး ဆုရရှိလာခဲ့တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် အားတက်စေတဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးပျောက်ဆုံးနေသလို ခံစားနေရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတိုင်းကို ခုလို အားပေးစကားပြောလိုက်ပါတယ်။
“ကိုယ့်တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပါ။ ကိုယ်က အလုပ်အကိုင်မရှိလို့ ဝင်ငွမရှိလို့ အနှိမ်ခံရတဲ့ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်နေရင် ကိုယ့်ဘဝကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ သိန်းဘယ်လောက်ရှာနိုင်မှ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းမမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရှာနိုင်တဲ့ ဝင်ငွေသေးသေးလေးကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို မပျောက်သွားအောင် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါ။”
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်း လက်မလျှော့ကြဖို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
“အရေးကြီးဆုံးကတော့ လုံးဝ လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့။ အခု အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေဟာ နောက်ထပ် ၆လကြာရင် ၊ နောက်ထပ် တစ်နှစ်ကြာရင် ဒီယောက်ျားရဲ့ အချစ်ဆုံး မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်၊ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို မြှင့်တင်ဖို့နဲ့ လုံးဝလက်မလျှော့ဘဲ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မအဖြစ် ရပ်တည်ရှင်သန်ဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့”
သူမကတော့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုမှာ အိမ်ထောင်ရှင်မဟာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အရေးပါတယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ မိသားစုရဲ့ စားဝတ်နေရေး ၊ သားသမီးရဲ့ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး စသဖြင့် မိသားစုရဲ့ အရေးကိစ္စအားလုံးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရတဲ့ သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘဝကိုယ် စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်နေတာမျိုးတွေမဖြစ်ကြဘဲ ကိုယ်ရပ်တည်ရှင်သန်နေရတဲ့ ဘဝမှာ အကောင်းဆုံး တန်ဖိုးအရှိဆုံး မိန်းမသားအဖြစ် ရပ်တည်ကြပါလို့ ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ ထပ်လောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။